Venezoela: Ny Fombandrazana Devoly Mandihin’i Yare · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2017 9:17 GMT
Fetim-pivavahana fahiny any Venezoela ny alakamisy miisa sivy aorian'ny Alakamisy Masina ny Devoly mandihy an'i Yare sady vakoka ara-javakanto sy ara-kolotsaina miavaka amin'ny fivavahana ao amin'i faritr'i Miranda. Azonao atao ny mitsidika ny lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia Dancing Devils of Yare izay ahitana ny rohy mankany amin'ireo lahatsoratra an-gazety raha mila fanazavana fanampiny momba ity hetsika ity ianao:
Ny devoly mandihy an'i Yare (Diablos Danzantes del Yare) no anaran'ny fety ara-pivavahana ankalazaina ao San Francisco de Yare, ao amin'ny fanjakana Miranda, Venezoela, amin'ny andron'ny Corpus Christi. Ny Sociedades del Santísimo (Fiarahamonin'ny Masina Indrindra) no miandraikitra ny fikarakarana io hetsika io. Tany amin'ny taonjato faha-18 no niandohany , ary izy no fetim-pirahalahiana zokiny indrindra any amin'ny kaontinanta amerikana.
Manome fampahalalana bebe kokoa momba ity fomba amam-panao ity ny bilaogy Talento Venezolano :
Manoritsoritra ny akanjo entin'ireo mpandihy ny Las Cosas de Rosa :
Azonao atao ihany koa ny mijery ny lahatsary izay manazava mikasika ity fomba amam-panao ity. Manolotra ny tatitra an-tsary ao amin'ny kaontiny Flickr i Hector Rattia. Misy andian-tsary tsara tarehy antserasera ihany koa hita ao amin'ny tranokala Behind the Mask.